Ebube akwukwo asaa di nma na ntanetị na Intaneti - Nyocha nke ndi okachamara
Data egosipụta na weebụsaịtị na blog dị iche iche nwere ike ịmepụta site na iji weebụ pụrụ iche scrapers. Ị nwere ike iji aka na iṅomi ma tinye data bara uru n'ime Akwụkwọ Okwu ma ọ bụ nweta usoro nchịkọta weebụ nke arụnyere na igwe gị. N'agbanyeghị ụzọ ị họọrọ, ị ga-enweta ohere zuru ezu na ederede na ihe oyiyi achọrọ. Ngwa ntanetị weebụ na-eji akpaghị aka ma wepụ data site na saịtị dị iche iche dabere na ihe ị chọrọ - oculos espelhado feminino oakley. Ụfọdụ n'ime usoro kachasị mma na ndị bara uru bụ ndị a kpọtụrụ aha n'okpuru.
Iji nchịkọta weebụ nchapu weebụ a, ị nwere ike ịchekwa data gị n'ụzọ dị mfe n'ụdị nke CSV faịlụ ma ọ bụ wepụ faịlụ ndị ahụ na ngwá ọrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọdụ data weebụ. Ngwá ọrụ a dị mma iji wepụ ihe oyiyi sitere na weebụsaịtị ma rụọ ọrụ na ihu igwe, njem na ọnụ ụlọ nkwari akụ, na-ewepụta data ha n'ime sekọnd.
2. Library Scraping Library:
Nke a bụ otu n'ime mmemme weebụ kachasị ike. O nweghi ego ọ ga-akwụ na -emepụta faịlụ dị mma ma ahazi maka gị. Nke kachasị mma bụ na ọ nwere ike inye aka wepụ ọdịnaya site na ngwa weebụ dị iche iche ma mee ka ọ ghọọ nhazi JSON, ụyọkọ, na koodu Linq.
CatchPage na-arụ ọrụ nke oma maka ma programmers na ndị na-abụghị ndị na-eme ihe nkiri ma ọ dịghị mkpa ka ị kwụọ ụgwọ dị ukwuu maka nsụgharị ya..Ọ bụ otu n'ime ihe nchọgharị weebụ kachasị ike nke na-ewepụta data sitere na ibe odo, akwụkwọ ọcha, na nnukwu akwụkwọ ndekọ na-enweghị nsogbu.
4. Web Craigslist Web na Email Extractor:
Ndị ahịa na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi, ndị ọkachamara SEO, na nnukwu òtù dị iche iche na-eji nnwere onwe free. Ị nwere ike inweta ọtụtụ data na-enweghị nchegbu banyere àgwà ya. Nchịkọta weebụ na email na Craigslist dị mma maka ma ebe nrụọrụ weebụ gị ma ozi ịntanetị ma nwee ike wepụ ihe niile bara uru na ihe oyiyi n'ime awa.
5. Wepụ N'ebe ọ bụla:
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị nke ọdịnala, ihe ntanetịime ntanetị weebụ ma na-achọ ihe ọzọ kwesịrị ekwesị, ị ghaghị ịnwa wepụ N'ebe ọ bụla. Ọ bụ otu n'ime mmemme kachasị ike ma nyere aka ịnakọta, ịhazi ma chekwaa data n'agbanyeghị oke ya na mgbagwoju anya ya. Na ngwaọrụ a, ị nwere ike ịnweta data achọrọ n'ime sekọnd kama awa. Ya mere, ọ na-azọpụta ma oge gị ma ike gị ma nye gị nsonaazụ kachasị mma.
6. Email File na Web Scraper:
Email File na Web Scraper na-ahapụ gị wepụ niile adreesị ozi-e na ọdịnaya weebụ, ị nwere ike idetuo na mado na data n'ime faịlụ Word gị. N'aka nke ọzọ, ọ nwere ike ịchekwa faịlụ CSV, PDFs na XML gị na nchekwa data ya, nke ị nwere ike ịnweta mgbe ọ bụla ịchọrọ.
FMiner bụ freeware na otu n'ime nchịkọta weebụ kachasị ike, nbudata weebụ, nchịkọta weebụ, ntanetị weebụ na ihe ntinye ntanetị. Ị nwere ike iji ya dị ka isi ihe ntanetị weebụ dịka ngwá ọrụ a na-ewepụta ma ihe odide na ihe oyiyi. Ọ nwekwara ike wepụ ọdịnaya bara uru site na faịlụ vidiyo ma nwee ike ịrụ ọtụtụ ọrụ n'ime ihe nkeji. Nke kachasị mma bụ na ọ ga - echekwa data na ngwaọrụ nchekwa ya ma ọ bụ nata ya na akụrụngwa gị.